१९ असोज, काठमाडौं । नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको निःशुल्क ओपीडी अभियान अन्तर्गत आउने शनिवार दुई फरक विज्ञहरुको टिमले निःशुल्क सेवा दिने भएको छ । नर्भिक अस्पतालमा रहेको यूरोलोजिष्टको टिम र श्वासप्रश्वास विशेषज्ञको टिमले निःशुल्क ओपीडी संचालन गर्ने भएको हो ।
यूरोलोजिष्टको पूरा टिम नै सहभागी भई निःशुल्क ओपीडी सेवा संचालन गरिने अस्पतालले जनाएको छ । यो टिमले बिहान १० बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म मूत्र तथा मूत्रनलीसँग सम्बन्धित समस्या भएकाहरुको निःशुल्क जाँच गर्नेछ ।
यस्तै, बिहान १० देखि १२ बजेकै समयमा अस्पतालका छात्ती तथा श्वासप्रश्वास रोग विशेषज्ञ डा. अच्युत भक्त आचार्यले निःशुल्क ओपीडी संचालन गर्नेछन् । छात्ती तथा श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या भएकाले डा. आचार्यको ओपीडी क्लिनिकमा सहभागी भएर लाभ लिन सक्नेछन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब बेरुजु, जम्मा बेरुजु ६ खर्ब ७६ अर्ब पुग्यो